Saldhigga Bilaashka: Macluumaadka Dadka, Meelaha ama Waxyaabaha | Martech Zone
In ka badan 39 milyan oo mowduuc iyo bilyan xaqiiqooyin ah ayaa la soo galiyay Saldhig bilaash ah, keyd xog ururin ah oo bulshada ka kooban oo dad caan ah, meelo, iyo waxyaabo. Qiyaas inaad awood u leedahay inaad marin uga hesho macluumaadka adoo adeegsanaya weydiimo fudud adoo adeegsanaya Metaweb Query Language (MQL). Taasi waa Freebase! Freebase xitaa awood ayey u leedahay codsiyada qaarkood - iyadoo la siinayo mowduucyada barnaamijyadu jecel yihiin Jiid ayaa ka faa'iideysanaya abaabulka iyo qiimeynta mowduucyada. Mahad gaar ah Chris Carfi farsamooyinka ila wadaaga!
Iyada oo loo marayo Wikipedia: Saldhig bilaash ah waa saldhig aqooneed wada shaqeyn ballaaran oo ka kooban metadata oo ay inta badan ka kooban yihiin xubnaheeda bulshada. Waa xog ururin qadka tooska ah looga uruuriyay ilo badan, oo ay ku jiraan tabarucaadka 'wiki' shaqsiyeed. Freebase waxay ujeedkeedu tahay inay abuurto ilo caalami ah oo u oggolaanaya dadka (iyo mashiinnada) inay marin u helaan macluumaadka guud si wax ku ool ah. Waxaa soo saaray shirkadda softiweerka ah ee Metaweb oo Mareykan ah waxayna si rasmi ah u socotaa ilaa bishii Maarso 2007. Metaweb waxaa Google ka heshay iib gaar ah oo lagu dhawaaqay July 16, 2010.
MQL waa qaab su'aal JSON ah oo soo saari kara natiijooyin aad u xaddidan:
Badanaa waxaa jira waqtiyo, sida suuqleyda, halkaasoo aan ku sameyneyno cilmi baaris mowduucyo, mowduucyo laxiriira, iyo aqoonsiga kala sarreynta iyo xiriirka ka dhexeeya canaasiirta. Saldhigga bilaashka ah wuxuu ku imaan karaa shaqo noocan ah. Freebase xitaa waxay leedahay a soo jeedinta widget inay kaa caawiso inaad dadka u kala beddesho meelaha ama waxyaabaha foomamkaaga ku jira. Tusaale ahaan, laga yaabee inaad rabto inaad ku xusho shirkad magaalo gaar ah gudaheeda, ama liistada buugaag mowduuc gaar ah leh, ama xitaa dadka caanka ah ama muusikiisteyaasha nooca mashruuca… Freebase ayaa kaaga jawaabi kara xogta aad u baahan tahay.
Tags: saldhig bilaash ahgoogle +mqlkeydka macluumaadka furan